IXigmer Lunar, yonke into oyifunayo kwi-smartwatch engama-25 euros | I-Androidsis
Ukuba uqhubeka uxhathisa ngaso nasiphi na isizathu thatha inyathelo eliya ekunxibeni, namhlanje sikuzisa ukhetho olunokukunceda ukuyeka ukucinga ngayo, Unyaka weXigmer X01. Ii-Smartwatches bezikunye nathi iminyaka eliqela kwaye kunyaka ophelileyo bayagqibezela ukuzibeka njengezincedisi eziphantse zabaluleka. Bambalwa kwaye bambalwa Abasebenzisi beselfowuni abangenayo iwatchwatch.
Ngeli xesha besivavanya i-Xigmer Lunar smartwatch kwiintsuku ezimbalwa kwaye Siza kukuxelela ngokweenkcukacha ukuba yintoni ekunokwenzeka ukuba usinike yona. Siyazi ukuba kunikwe isithembiso esikhulu esikhoyo kolu hlobo lwegajethi, kuya kusiba nzima ukugqiba ngento enokukwazi ukuhlangabezana neemeko ezincinci ngaphandle kokugqiba uhlahlo-lwabiwo mali.
1 IXigmer Lunar, yile nto uyifunayo
2 I-Lunar Xigmer engafakwanga ebhokisini
3 Uyilo kunye nesitayile seXigmer Lunar
4 Yonke into iLunar Xigmer inokukunika
5 Ukuzimela kunye nokunxibelelana
6 Iphepha lobugcisa
7 Iinkonzo kunye neengozi zeLunar Xigmer
IXigmer Lunar, yile nto uyifunayo
Xa kuziwa ekufumaneni Iwatchwatch edibanisa into ekhangelwe ngumntu wonke; Iimpawu ezintle kunye noyilo olulungileyo, kubalulekile ukwazi ukuba yintoni uhlahlo-lwabiwo mali esinalo. Ke ngoko, ucinga ukuba iLunar Xigmer iwotshi engabizi mali ininzi, Yi le Uyakwazi ukuphila ngokuvisisana noko sinokukufuna Ukungena kwi-smartwatch.
Kodwa ayisiyiyo kuphela ekwaziyo ukufikelela kulindelo esinokuba nalo ngewotshi esezantsi, Iya kwanelisa into esinokuyilindela kwesinye isixhobo esibiza kakhulu. Ngaphandle kokuzonwabisa, kodwa ngazo zonke iimpawu ozifunayo. Ngaphandle kwamathandabuzo, ukhetho olunomdla kwabo bagqiba ngokunxiba ngaphandle kokufuna ukuchitha imali eninzi.
ILunar Xigmer ibonelela nge- uyilo oludala ngokudayala okungqukuva ukuba ngokubonakala komzimba akuqapheleki. Kodwa kwangaxeshanye, Isibheno kwabo bangazithandiyo izixhobo ezitshatileyo. Ukuba into oyikhathaleleyo yile nto inokubonelelwa yi-smartwatch, kwaye awufuni nokuchitha imali eninzi, fumana i-Lunar Xigmer ngoku ngaphezulu nje kwe-euro ezingama-25.
I-Lunar Xigmer engafakwanga ebhokisini
Sisoloko sithanda ukubona okungaphakathi kwebhokisi yazo zonke izixhobo esinethamsanqa elaneleyo lokulivavanya. I-unboxing yeewatchwatches ayisoloko ibonelela ngezinto ezothusayo, kwaye le yimeko enye. Sibonile ngamanye amaxesha ukuba abavelisi babandakanya umtya owongezelelweyo, wolunye umbala, kodwa oku akunjalo.
Sinezethu uxoxe, ebonakala kunye nayo abicah umtya beka. Ukongeza, sine Intambo yokutshaja, eneempumlo zemagnethi yakudala efanelekileyo. Kwaye akukho nto yimbi, ngaphandle kwesishwankathelo isikhokelo sokusebenzisa enye yezo kungafundwa mntu.
Uyilo kunye nesitayile seXigmer Lunar
Yintoni eyahlula ezinye ii-smartwatches kwezinye kwindawo yokuqala ngokungathandabuzekiyo yi ifomathi yenqanaba lakho. Kukho umthetho jikelele, ngaphandle kwemodeli ethile okanye engaqhelekanga, iisetyhula iiwotshi okanye iiwotshi zesikwere. ILunar Xigmer yenye yeyokuqala. Iwotshi enefowuni ejikelezayo enikezela ngenkangeleko engabonakaliyo kodwa iyayithanda ukuguda kwemigca yayo.
La Ukucofa ingxubevange yentsimbi Imatshisi ecacileyo ngokugqibeleleyo ngombala omnyama we-matte womtya wayo. Idityaniswa ngokugqibeleleyo neyakho isikrini esine-diagonal yee-intshi ezi-1,3, kunye ne Isisombululo esingaphezulu komndilili we-360 x 360 pixels, ekwi-TFT yolu bungakanani inikezela ngamava omsebenzisi anelisayo.
Isisombululo saziwa ngokulungileyo kunye Ukucaca kwemibala yayo, singazifunda kakuhle kangakanani izaziso, ngakumbi ngakumbi Ukuqaqamba kwescreen efundeka nkqu nakwiimeko zangaphandle zokukhanya kwelanga. Ngaphandle kwamathandabuzo inqaku elixhasa le wotshi onokuyithenga nge-euro ezingama-25.
Kulo Icala Elilungile ukusuka kwiLunar Xigmer esiyifumanayo iqhosha lokuchukumisaEsikhumbuza okokuqala ngesithsaba seewotshi zakudala. Eli qhosha line imisebenzi yokucima / yokucima kunye nokubuyela kuyo nayiphi na imenyu ukuya kwiscreen esikhulu. Inefayile ye- ukuguda kakuhle kunye nokubuyela umva okuhle.
Ngoku i Unyaka weXigmer X01 inokuba yeyakho nge-euro ezingama-25 kuphela
Kwi ngasemva siyifumene esweni senhliziyo kunye ne-sensor ezimbini ezibonelela ukufundwa okwangoku. Kwaye zimbini izikhonkwane ngomazibuthe eya kulunga ngokugqibeleleyo ngentambo yokutshaja ibhetri.
La xhuma, njengesiqhelo, kunjalo yenziwe nge-silicone ukubamba kubonakala kumgangatho olungileyo. Umbala wayo omnyama uhambelana kakuhle netoni engwevu ekhanyayo yobuso bewotshi. Sinokutshintsha ngokulula enkosi ngokuvula nokuvala iithebhu. Nangona kule meko sinye kuphela.
Yonke into iLunar Xigmer inokukunika
Kukho izinto ezininzi esizilindeleyo xa kufuneka sithenge into enxibekayo. Kwaye kufuneka sihlale sikhumbula ukuba ixabiso, njengomthetho, lihambelana ngokuthe ngqo kunye nezibonelelo abanokuzinikela. Ke xa sifumana Isixhobo esingabizi kakhulu kwaye sinako ukubonelela kakhulu kufuneka siyithathele ingqalelo.
Kwimeko yeXigmer Lunar, sifumana inani elikhulu lezinto zokusebenza. Ngaphandle kwe isaziso somyalezo ukuba sinokumisela ukungcamla, sinokufumana kwakhona imilinganiselo ethembekileyo yenqanaba lentliziyo yethu. Sikwanamathuba okuba jonga umsebenzi wethu womzimba, kubalwa amanyathelo emihla ngemihla kunye neekhalori ezitshisiweyo.
Sinefayile ye- ujongano olulula ngokwenene ukuqonda kwaye uqalise ukusebenzisa kwangoko. Ngokutyibilika umnwe wakho ngokolwalathiso esinokufikelela kulo kwiimenyu ezahlukeneyo. Singafumana Ungqamaniso olufanelekileyo lwedatha yewotshi kunye ne-smartphone yethu. Ukudibana kukhululekile kuba ukusuka kwiyure ngokwayo sinokucwangcisa izaziso ezahlukeneyo, iialamu okanye izilumkiso.
Enkosi lokusebenza Tfit, Beka ikhonkco, sinokuba nalo idatha okwangoku erekhodwa kwi-smartwatch ngqo kwi-smartphone yethu. Siza kufumana i-tYonke idatha esithandayo kwaye siqwalasele ngaphambili, kunye nerekhodi epheleleyo yemidlalo yethu. Kwakhona Singazilawula ii-alamu, ii -apps esizikhethayo okanye siqwalasele izilumkiso malunga nokuhlala phantsi.
Umthuthukisi: TENG JINDA
Ukuzimela kunye nokunxibelelana
Ngaphandle kwamathandabuzo, Ukuzimela kuhlala iba yenye yezona ndawo zibalulekileyo xa uthatha isigqibo kwi-smartwatch enye okanye enye. Kule meko, nge iXigmer Lunar sifumana ibhetri ehlawula i-250 mAh. Into ekumndilili wezixhobo zeempawu ezifanayo. Iwatchwatch ekukukhapha Ngalo lonke ixesha, i Unyaka weXigmer X01 yile nto uyifunayo.
Kodwa kumsebenzisi wokugqibela, eyona nto ibaluleke kakhulu kukuzimela ukuba le ntlawulo ibhetri iyakwazi ukubonelela. Siyabala, sNgokomvelisi ngokuzimela okuya kufikelela kwiintsuku ezingama-30 yokusetyenziswa. Nokuba ku Kuya kufuneka sicacise ukuba kunjalo ngokusetyenziswa okuncinci, phantse uphumle, iwotshi. Kodwa ukuba sifuna i-smartwatch kukusinika konke ukusetyenziswa okunokwenzeka, kwaye kule meko Ukuzimela kwabo kunqunyelwe kwisiqingatha nje, malunga neentsuku ezilishumi elinesihlanu yokusetyenziswa, ezingezizo nokuba zimbi.
Ukutshaja, njengoko besesitshilo, sinentambo ekugqibeleni apho sifumana izikhonkwane ezibutsalane. Ukudibanisa kugqibelele kwaye umthwalo wenziwe kwangoko. Inqaku elinye elithandekayo lelo Singaba ne-100% yentlawulo yale bhetri ye-lithium ion kwiyure nje enesiqingatha.
Kwicandelo lonxibelelwano sifumana umthetho olandelwayo we Bluetooth ebonakala ngathi ingaphantsi kwezinye izibonelelo. Okwangoku, ngoqhagamshelo lweBluetooth 4.0 iwotshi ayilahlekelwa luqhagamshelo ngesixhobo nangaliphi na ixesha kwaye inikezela ngokusetyenziswa okuhle kakhulu kuhlala kuphendula ngokuchanekileyo.
Enye yee-buts esinokuyibeka yile ayinayo iGPS, okanye iNFC. Ezona zinto zimbini zifunwayo ngaphandle kwamathandabuzo ekunxibeni. Kodwa elinye ixesha Kuya kufuneka silazi uluhlu lwamaxabiso apho ikhoyo imole. Iimpawu "eziphezulu" esinokuzifuna kwizinto ezinxitywayo ezixabisa ngaphezulu kweshumi kwixabiso lazo. Kwaye sinokufuna okungakumbi kwi-smartwatch esiya kuthi siyibhatale i-euro ezingama-25.
Umzekelo Unyaka X01
Isikrini 1.3 intshi
Isigqibo 360 x 360
Ukuchasa Isiqinisekiso se-IP68
Ibhetri 250 mah
Ukuzimela ukuya kuthi ga kwiintsuku ezingama-30
Ixesha lokutshaja Iiyure ze1.5
Ubukhulu 45.3 x 11.4 mm
U bunzima 55 g
Ixabiso 25.10 €
Ikhonkco lokuthenga Unyaka weXigmer X01
Iinkonzo kunye neengozi zeLunar Xigmer
La isikrini ime ngaphandle kwayo ubungakanani mkhulu kunokhuphiswano kunye isisombululo esihle kakhulu.
Uyilo inobukrelekrele kwaye intle, ilungele abo bafuna ukuba netekhnoloji yamva nje kodwa ngaphandle kokutsala umdla.
El xabiso iba noqoqosho kakhulu xa ujonga into enako ukusinika yona.
Umboniso kunye nokusonjululwa
Hayi Inemodyuli IGPS, into esengqiqweni ngokwexabiso layo.
Nathi asifumananga NFC, Isizathu sinye, ixabiso.
Unyaka weXigmer X01
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » Reviews » IXigmer Lunar X01, uhlalutyo, ukusebenza kunye nexabiso
Iimidlalo ezi-7 eziphambili ze-indie ze-Android